My Little Poem Factory: August 2008
Wednesday, August 27, 2008 လေခိုနေတဲ့ ညနေ
Posted by Ðaywalker[Soul] at 11:51 PM | Permalink | Comments Tuesday, August 26, 2008 ဆေးရုံ
ကမ္ဘာပေါ် ငါတို့ရောက်လာခြင်း အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကိုယ်အခြမ်းပျောက်ကို ရှာဖို့လည်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်သလိုမျိုးပေါ့ရောဂါပိုးမွှားရှာသလို ရှာခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ရပုံက ဆေးရုံတစ်ခုမှာပေါ့ပျင်းတ်ာနဲ့ ဆေးရုံတက်ဖို့ ရောက်သွားတယ်လူနာကုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်စာဖတ်နေတယ်အပျင်းပြေ ဆေးပြားသောက်ချင်လည်း သောက်မှာပေါ့ဒီအဖြစ်ကို မြင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်က(နောက်မှ သူပြောတာ သနားလို့တဲ့ )အဲဒီတော့ ကိုယ်အပျင်းပြေဖို့ပေါ့ကိုယ်သွေးထဲ ပိုးမွှားတွေလွှတ်ထည့်လိုက်တယ်ဒီကတည်းက... ...ဆရာမလေးထံ ကိုယ်ဟာနာဖျားသူစစ်စစ်ဒီကတည်းက... ...ကိုယ့်ရောဂါ ပိုးမွေးသလိုမွေးခဲ့ဒီကတည်းက... ...ဒီကတည်းက... ...ဘယ်လိုလဲဆိုတော့... ..ကိုယ်ကသူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာအရူးမက သူ့သားငယ်ကို ဘယ်လိုချစ်သလဲဆိုတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့...ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်သလိုမျိုးပေါ့ကမ္ဘာပေါ် ငါတို့ရောက်လာခြင်း အကြောင်းအရာတစ်ချို့ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့ ရောက်လာသူများလဲဖြစ်ရဲ့အဲဒါကို ပြောဖို့မေ့နေတယ်...။ ။ - မျိုးသက်နှစ် -Labels: love
Posted by Ðaywalker[Soul] at 11:39 PM | Permalink | Comments Sunday, August 24, 2008 နွေ
ငါရောက်နေတဲ့ မြို့ က 24'Cဥသြသံတွေတော့ ဒီမှာမရှိဘူးပူတာကတော့ ကမ်းကုန်ပဲသင်္ကြန်ကလည်း ဟိုတစ်ယောက်မပါတဲ့ သင်္ကြန်ငါ့စိတ်နဲ့ ငါ့ ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ချွေးနဲ့ကိုယ် ပြန်အအေးပတ်တယ်။ဒီလောက် ပူလောင်နေတာတောင်ညနေ(၅)နာရီ မကျော်ခင် ရေမချိုးရဘူးတဲ့ပွင့်လင်းရာသီမို့ မီးကြွင်းမီးကျန်လည်း သတိပြုရတယ်အချစ်ဦးဆိုတာလည်း...............သိတဲ့အတိုင်းဘယ် တော့ မှ..............မငြိမ်းဘူး ပြာဖုံးတာပဲ ရှိတယ်အေးလေအချစ်စစ်ဆိုတာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲပါတယ်ဒီလို စိတ်ဖြေရင်းမွန်းတည့်တည့်မှာ သက်ဆိုးရှည်နေရတယ်။လေရူးတွေကပဲ အကကောင်းတာလားငါကလည်း အညှာလွယ်တဲ့ သစ်ရွက်ဝါပဲစိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြွေကျခဲ့တယ်။ ။ - စိုးလှိုက်ဦး -Labels: life, love, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 11:58 PM | Permalink | Comments Tuesday, August 12, 2008 အိပ်တန်းပြန်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 10:44 AM | Permalink | Comments Saturday, August 9, 2008 ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ က အရေးတကြီး ခေါင်းလောင်းသံ
(သက်သေပြချက်ပေးစရာ လိုလို့လားအချစ်မှာ ။ငါ့ကို ရင့်ရင့်သီးသီးလေးပြန်ပြောစမ်းပါ )မင်းခြေထောက်လေး နှစ်ချောင်းနဲ့သာအတူလျှောက်ရမယ်ဆိုအမြဲတမ်း မိုင်ပေါင်း-၁၅၀၀ရယ်သံလေး ကြားရရုံနဲ့အရည်ပျော်ချင်နေတဲ့ ငါပါ ခလေးမရယ်........။သက်ရှိအလှတရားနွယ်တက်သစ်ပင် နင်လေဆံစနွယ် ကျေပြင်ပေါ်တွဲခိုခါးအထိရှည်တဲ့ အင်္ကျီကို ၀တ်မယ်လက်မောင်းသားလေးလဲ ပေါ်နေမယ်စက်ဘီး အနှေးစီးရင်း တိုးတိုးလေး သီချင်းညဉ်းမယ်တခါတလေ စိတ်လိုလက်ရ ရယ်မယ်ဇာတ်နာတဲ့ ၀ထ္တုဖတ်ပြီးရင် ငိုမယ်လမ်းလျှောက်ရင် ကိုယ်လုံးလေး လှုပ်ခါမယ်စပယ်ရနံ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို သုံးမယ်အေရိုးဗစ် ကစားမယ်ဒီနှစ်ပိုင်းထဲ တရားလည်း ထိုင်ဦးမယ်အဲဒီလို မင်းကို အလွတ်ရနေတာတောင်ငါ့အတွက် အောင်မှတ် မနီးသေးဘူးလားကွယ်။ကိုယ့်တံတွေး ကိုယ်မျိုရတာလောက်ကိုယ့်ဆန္ဒကိုယ်မျိုရတာ မလွယ်လွန်းလို့မြို့ ကြီးပြကြီးတွေလို မစိမ်းစမ်းနဲ့ကွယ် ။ခြေချော်လက်ချော် ဒီစာမေးပွဲအောင်ပြီးရင်“ကားအ၀င်အထွက် ရှိသည် ဆိုင်းဘုတ်ပြားလေးခပ်တည်တည် ချိတ်ဆွဲမယ်ငါရဲ့ အိမ်နံပတ်ကို မင်းနာမည် ရေးထိုးမယ်ဆေးလိပ်လည်း ဖြတ်မယ်လိုအပ်ရင် ဆံပင်တွေပါ ဖြတ်မယ်ချစ်သူကို အဝေးက မြင်နိုင်မယ့်မျက်မှန်ထူထူလည်း ၀ယ်ဝတ်လိုက်ဦးမယ်အဲသလို အလင်းလုရင်း အရပ်ပိုရှည်လာခဲ့ငါ့ ဒီအချစ်ကဗျာကို သိပ်ပြီး စိတ်မရှည်တော့ရင်လဲကွယ်...(ဒီက ငါ့ကို)နေ့ချင်းညချင်း ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ကွယ်.....။ ။ - မျိုးသက်နှစ် -Labels: love, မျိုးသက်နှစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 2:10 PM | Permalink | Comments Friday, August 8, 2008 မိသားစု
ဒီအပင်က ပေါက်ဖွားလာတဲ့အသီး အပွင့် တွေဟာတစ်ချိန်မှာသူ့မျိုးစေ့နဲ့ သူ ရှင်သန်ကြမှာပဲ. . .။သူတို့ တစ်တွေအသီးအပွင့် ဘယ်လို ဖြစ်လာကြတယ် ဆိုတာသိသလိုလောကဓံ တရား အကြောင်းကိုလည်းနားလည် ကြပါတယ်။ဒီ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာမှထာဝရ ရပ်တည်လို့ မရနိုင်တာသူ ရှင်သန်ဖို့ သူ ကြိုက်ရာမြေ ရွေးပါစေလေ . . .ရေခံမြေခံ မကောင်းတာတော့သူ့ အကြောင်းတရားပေါ့ ။ဒီလိုနဲ့ညနေ ထမင်းဝိုင်းလည်းပန်းကန်ချပ်ရေ လျှော့လာနောက်ဆုံးတော့ အရင် အတိုင်း ပင်စည် နှစ်ခွသာ . . .။ ။- ရိုးမြင့်ကောင်းသစ် -Labels: family, ရိုးမြင့်ကောင်းသစ်
Posted by Ðaywalker[Soul] at 3:23 AM | Permalink | Comments Thursday, August 7, 2008 အရောင်ပျယ်နေတဲ့ နေ့
စိတ်မပါ လက်မပါ မနက်စာရယ်နံနက်ချိန်ခါ တေးသံလည်း မသာဘူးစိတ်က နေရောင်အောက်မှာ အရောင်လွင့်တယ်။ကျွန်တော်. . .စိတ်နဲ့ ကိုယ် မကပ်တာ (၅)နှစ် ရှိပြီ မေမေ . . .ကျွန်တော် ဖျားနေတာလည်း (၅)နှစ် ရှိပြီ မေမေ . . .ကျွန်တော် သေသွားတာလည်း (၅)နှစ် ရှိပြီ မေမေ . . .ကျွန်တော် ပျောက်သွားတာလည်း (၅)နှစ် ရှိပြီ။သား အိပ်မက်ထဲက ကြယ်တွေ မပွင့်နိုင်တဲ့ ရာသီပဲကဗျာဆရာလည် မဖြစ်ဘူး။ပရိုဂရမ်မာလည်း မဖြစ်ဘူး။စိုးလှိုက်ဦးလည်း မဖြစ်ဘူး။ကောင်မလေးရဲ့ ဘဲလေးလည်း မဖြစ်ဘူး။ဒီကမ်းပါးမှာ နေမြင့်လေလေ ပါပဲ မေမေရယ်. . . ။ဟိုကောင် ပြောတာတော့သားဟာ ဖိနပ်မှားစီးတဲ့သူ တဲ့ . . .။ဖြစ်နိုင်ရင် ဖိနပ်ထက် ရှေ့ရောက်အောင် ပြေးချင်တဲ့ သားဟာအခု ဖိနပ်ကိုတောင် မမီတော့ဘူး။ရောဂါတိုင်းဟာ ဆေးခါးကြီးတွေနဲ့မှ ပျောက်မယ်လို့ဘုရား မဟောခဲ့ဘူး ထင်တာပဲ . . .။ဒီလို နဲ့ ပဲသားအိပ်မက်တွေ . . . ပြန်မျှားလို့ မရတော့ဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာ စံပယ်တွေ ပွင့်ဖို့ ဆိုတာဘုရားပွင့်သလောက် ခက်သွားပြီဆိုတာ သေချာသွားသလိုမျိုးပေါ့ . . .။ - စိုးလှိုက်ဦး -Labels: life, စိုးလှိုက်ဦး
Posted by Ðaywalker[Soul] at 3:01 AM | Permalink | Comments Search